Salmonellosis (အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Salmonellosis (အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း)
Salmonellosis (အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း) ကဘာလဲ။
Salmonellosis ဆိုတာ အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းတွင် salmonella ဘက်တီးရီးယားရောဂါ ဝင်ရောက်ကူးစက်ခြင်းကို ခေါ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါက အစာအိမ်ရောင်ရောဂါနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ သိပ်မပြင်းထန်တဲ့ လူနာတော်တော်များများကတော့ ၄ ရက်ကနေ ၇ ရက်အတွင်း ဘာကုသမှုမှ မပါပဲ ပျောက်ကင်းတတ်ကြပါတယ်။ ရောဂါ ပြန့်ပွားမှုကတော့ လူတွေ ရောဂါရှိတဲ့ အစားအစာကို စားမိပြီးလျှင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။(စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲမှာ စားမိခြင်း) တချို့ ဝမ်းလျှောရောဂါ အခြေအနေဆိုးတဲ့ သူတွေကတော့ ဆေးရုံတက်ပြီး ဓါတ်ဆားရည်နှင့် ပဋိဇီဝဆေးရည်များ သွင်းရပါတယ်။
Salmonellosis (အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
salmonellosis ရောဂါသည်တော်တော်များများက ဆင်းရဲတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ လေထုညစ်ညမ်းမှု၊ မသန့်ရှင်းမှု နှင့် ဘက်တီးရီးယားရောဂါများတဲ့ နေရာတွေမှာ နေထိုင်နေကြသူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ထို့ပြင် သင်က ရောဂါရှိတဲ့ သူနဲ့ ထိတွေ့မိလျှင်လည်း ရောဂါကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ နှင့် ကိုယ်ခံအားမကောင်းသူတွေမှာလည်း salmonellosis ဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေထက် salmonellosis ပိုဖြစ်ကြပါတယ်။
Salmonellosis (အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အဓိက ရောဂါလက္ခဏာကတော့ ဝမ်းလျှောတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက္ခဏာတွေက မပြင်းထန်ပဲ တစ်ရက်မှာ နှစ်ကြိမ်မှ ၃ ကြိမ်ထိ ဝမ်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာက နောက်ပိုင်းမှာ ပိုပြင်းထန်တဲ့ ၁၀ မိနစ်ခြား၊ ၁၅ မိနစ်ခြားတစ်ခါ ဝမ်းသွားခြင်းတွေနဲ့ တွဲပြီး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ တခြားရောဂါလက္ခဏာတွေ အနေနဲ့ ဝမ်းတွင်း သွေးပါခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ဖျားခြင်းနှင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်းတို့လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Salmonellosis (အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
သင်ဟာ salmonellosis ရောဂါကို အစာ စားခြင်း ဖြင့် ဥပမာ ဥများ၊အမဲသား၊သားစား ကြက်ငှက်များ၊ အသီး သို့ မသန့်ရှင်းတဲ့ ရေ သို့ နို့တွေစားသောက်မိခြင်းဖြင့် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ချက်ပြုတ်ပြီး စားခြင်းက ဖြစ်နိုင်ချေကို လျှော့ချပေးနိုင်သော်လည်း လုံးဝမဖြစ်လာနိုင်တာတော့ မဟုတ်ပါ။Salmonellosis က အိမ်သာတက်ပြီး လက်မဆေးခြင်းကြောင့် လူတစ်ယောက်မှ တစ်ယောက်ကို ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ Salmonellosis က လူတွေကို အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်တဲ့ လိပ် နှင့် inguanas တွေမှလဲ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
Salmonellosis (အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
salmonellosis ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
Salmonella ပြန့်ပွားနေတဲ့ အရပ်ဒေသမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း သို့ ခရီးသွားခြင်း
Salmonella ဘက်တီးရီးယားတွေနဲ့ ထိတွေ့မှုရှိတဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်းတွင် အလုပ်လုပ်ခြင်း
Corticosteroids ကဲ့သို့သောဆေးများ သို့ HIV/AIDS ရောဂါတွေကြောင့် ကိုယ်ခံအားကျဆင်းစေခြင်း
Salmonella ပါနိုင်တဲ့ မသန့်ရှင်းတဲ့ ရေကို သောက်မိခြင်း
Salmonellosis (အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်က သင့်ရောဂါလက္ခဏာတွေ အပေါ်မူတည်ပြီး ရောဂါကို အတည်ပြုပါမယ်။ ထို့ပြင် သင့်ရဲ့ မစင်၊ သွေးနှင့် ဆီးတို့ကိုလည်း ပိုပြီးသေချာအောင် စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ သွေးစစ်ခြင်းဖြင့် တခြားသော ရောဂါတွေကို စစ်ထုတ်ြီးသား ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
Salmonellosis (အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
Salmonellosis အပျော့စားတွေက ကုသမှု မလိုအပ်ပါဘူး။ လူနာအများစုကတော့ ၂၄ နာရီကနေ ၄၈ နာရီအတွင်း သူ့ဖာသာ ပြန်ကောင်းနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကိုယ်သင် သီးခြားရောဂါခြေချုပ်ဖြင့် နေသင့် သည် သို့မဟုတ် သီးခြားအိမ်သာကို အသုံးပြုပါ။ ရောဂါပိုးများ မပြန့်နှံ့စေရန် လက်ဆေးကြောဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
သင့်မှာ အဖျားရှိနေပြီး တိုက်ဖိုက်လိုမျိုး အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ရောဂါမျိုးရှိနေလျှင် ပဋိဇီဝဆေးကုသမှု လိုအပ်ပါတယ်။ ရေဓါတ်ဆုံးရှူံးမှုအတွက် ရေများများသောက်သင့်ပါတယ်။ ဝမ်းလျှော်တာ သက်သာသည် အထိ Gatorade or Pedialyte အရည်တစ်မျိုးထဲ သောက်ပြီး အစားအသောက်ကို ထိန်းထားပါ။ အဲ့ဒီနောက်မှာ ပုံမှန် အစားအစာ ပြန်စားနိုင်ပါတယ်။ နို့ထွက် ပစ္စည်းတွေက ဝမ်းလျှော်တာကို ပိုဆိုးစေတာမို့ ရက်အနည်းငယ်လောက် မသောက်ပဲ နေသင့်ပါတယ်။ ဝမ်းလျှော်တာ က ဆိုးလျှင် အကြောဆေးသွင်းဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက salmonellosis ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် salmonellosis ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
• အသားနဲ့ ကြက်၊ငှက်တို့ကို ချက်ပြုတ်ပြီးမှ စားသုံးပါ။
• အစားအစာကို သေချာ သိမ်းဆည်းပါ။ ဥပမာ အရွက်သုတ်တွေနဲ့ မယောနိစ်တွေနဲ့ကို အခန်းအပူချိန်မှာ အချိန်အကြာကြီး ထားတာမျိုးမလုပ်ရပါ။
• ပိုးသတ်ထားတဲ့ နို့ကိုသာ သောက်ပါ။
• ခရီးသွားလျှင် ရေသန့်ဘူးသာ ဝယ်သောက်ပါ။
• Salmonella ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ တိရာစ္ဆန် နှင့် လူများကို ရှောင်ပါ။
• ရောဂါမပြန့်ပွားစေရန် အိမ်သာတက်ပြီးတိုင်းရေဆေးပါ။
• ဓါတ်ဆားပါတဲ့ ရေကို ဝမ်းလျှော်တာ ရပ်တဲ့ အထိသောက်ပါ။
• ဝမ်းလျှော်တာ ရပ်သွားပြီးတဲ့နောက် ကယ်လိုရီနည်းတဲ့ အစားအသောက်တွေကိုသာ စားပါ။
• သင့်မှာ ရေဓါတ်ခမ်းတဲ့ လက္ခဏာတွေ (အသားအရေ တွန့်ခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ ဆီးနည်းခြင်း) သို့ ၄၈ နာရီကြာအောင် ဖျားနေခြင်း၊ ဝမ်းလျှောအလွန်ဆိုးခြင်း၊ အသားဝါခြင်း သို့ မျက်စိဝါခြင်းများဖြစ်နေလျှင် ဆရာဝန်ကို ခေါ်ပါ။
Whitehouse Station, NJ, Merck Research Laboratories. Print edition. Page 1173.
Salmonella Infections. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/salmonellainfections.html. Accessed September 28,2015.
Oral Herpes (ပါးစပ်ရေယုန်)
Acquired Polyneuropathy (မွေးရာပါ မဟုတ်သည့် အာရုံကြောများ ထိခိုက်သော ရောဂါ)